Ekugcineni, uhulumeni nosomabhizinisi bayavumelana, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
KULULA kwenye inkathi ukukholwa ukuthi izwe lethu limi ndawonye, alikwazi ukwenza izinguquko ezidingekayo ukukhulisa umnotho. Kepha kulo nyaka ngibona ushintsho oluthembisayo endleleni uhulumeni obona kuyikona okudingekayo ukuxazulula izinselelo zomnotho wethu.
INkulumo eBhekiswe esiZweni ikuvumile ukuthi osomabhizinisi yibona abayinsika ekusunguleni imisebenzi. UMengameli uCyril Ramaphosa ubezwakala kahle ngenkathi ethi: “Umsebenzi omqoka kahulumeni wukwenza isimo esizosiza imboni ezimele (izinkampani ezinkulu nezincane) ukuthi zisunguleke, zikhule, zithole amakhasimende amasha, zikhiqize imikhiqizo emisha futhi ziqashe izisebenzi ezintsha.”
Bekuyinkulumo ebalulekile lena ngeqhaza okumele libanjwe ngosomabhizinisi emnothweni nokubaluleka kukahulumeni ukwenza loko kube yimpumelelo. Ubalule izingqinamba okumele zilungiswe; ukuba nogesi othembekile, amachweba nezitimela okusebenza kahle, ukulungisa ukushoda komoya wokudonsa i-internet namanzi.
Umengameli ukhulume ngesidingo sokuqeda imidanti ebambezela izinkampani ngezindleko futhi iphazamise ukusebenza kwazo ngendlela efanele.
Kulandele iSabelomali sangesonto elidlule. UNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ukhombise isibindi ekhuluma ngokunciphisa isikweletu sikahulumeni ngokuthi kuncishiswe izindleko ezintweni ezidla imali kakhulu, kwathi lezo okufanele kwayizo azinyusela imali. Loku kunikeza ithemba lokuthi uhulumeni usuyakwazi ukulawula isikweletu sawo futhi uzolehlisa izinga lesikweletu eminyakeni embalwa ezayo.
Kube kuhle futhi nokuthi ungqongqoshe uqhubekile necebo lokwehlisela izinkampani intela, njengoba isukile ku-28% yehlela ku-27%. Loku kwakumenyezelwe kwiSabelomali esidlule nokuyingxenye yokuguqula indlela intela ebanjwa ngayo, nokuhambisana nokunciphisa inqwaba yezinto ebezikhona ebezikhuthaza ukukhokha intela. Ngamanye amazwi, akwenzi lutho olutheni. Nokho-ke kuhle ukuthi kusizondeza ekutheni senze ngendlela okwenziwa ngayo emhlabeni wonke.
Inzuzo yezinkampani inciphile, nokunciphise intela ekhokhwa yizinkampani. Ngakho ukwehlisa izinga lentela kuzokhuthaza ezinye izinkampani ukuthi zize eNingizimu Afrika kunokubheka amanye amazwe anentela encane.
Njengoba eshilo ungqongqoshe, indlela intela yezinkampani eyiyona kumele yeseke izinkampani ukuthi “zikhule, zinyuse imali eziyitshalayo futhi zandise abantu ezibaqashile”.
Kokubili iNkulumo eBhekiswe esiZweni neSabelomali kukhombisa ukuhambisana nezinto osomabhizinisi asebekhulume ngazo isikhathi eside. Kubonakala sengathi sekuyazwakala manje. Izinto ezinqala engivame ukugxila kuzona, nezingqinda ukukhula kwemisebenzi namabhizinisi, seziyavunywa wumengameli nongqongqoshe wezeziMali.
Osekusele manje yinselelo yokuthi lezi zinto ziguqulwe ukuze osomabhizinisi bezotshala. Ayikho into etheni exakayo ngokudingwa ngosomabhizinisi ukuze batshale: badinga ukubona ukuthi imali ezobuya ingaphezu kwalena abazoyitshala.
Izinga lentela elincishisiwe liyasiveza leso sithombe. Ukuthuthukisa ukusebenza kahle komnotho wumsebenzi ozothatha isikhathi eside. Uma kuncipha izindleko osomabhizinisi abazithwalayo uma bethutha impahla kuzoba ngcono kakhulu kuwona wonke umuntu kanjalo nangokomvuzo wokutshaliwe. Ugesi othembekile nobiza kahle nawo ungasiza kakhulu.
Okokuqala ngqa ngizwa sengathi akekho odonsa abhekise lena phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi. Loku kunikeza iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) nezinye izinhlangano zamabhizinisi ithuba lokusebenzisana nohulumeni ukuletha esikudingayo ukukhulisa umnotho nokusungula imisebenzi.
Ekugcineni, yimisebenzi esiyidingayo ukubhekana nezinselelo esinazo zobubha nokungalingani eNingizimu Afrika. Nginethemba elikhulu ngamathuba okwenza loko manje njengoba uhulumeni esebona ukuthi akukwazi ukuthi kube wuye umqashi ozoletha imisebenzi emisha.
Sekuyisikhathi somnyakazo. Nakuba kwamenyezelwa uguquko embonini kagesi njengoba sesingazikhiqizela ugesi owu-100MW ngaphandle kwelayisensi kodwa inqwaba yemidanti yeNational Energy Regulator of South Africa isho ukuthi kusazothatha isikhathi ngaphambi kokuthi iqale le misebenzi futhi kudingeka uhulumeni ungenelele ngokushesha.
Inselelo yokuqeda imidanti ebambezela osomabhizinisi wumsebenzi engifisa impela ukusebenzisana nohulumeni kuwona. Kufanele siqale ngemithetho yeCOVID-19 esekhona ezinkampanini esihlupha izinkampani ezingakwazi ukuthi izisebenzi zibuyele emsebenzini futhi ezinqinda imisebenzi.
Ngikujahile ukusebenza nohulumeni nangezinye izindlela ezizokwenza iNingizimu Afrika ibe yindawo engcono yokuba nebhizinisi nokufaka isandla emnothweni.
Ukuhlanganisa iSabelomali ezweni lethu okunenqwaba yabantu abanezidingo ezingafani wumsebenzi onzima. ISabelomali sangesonto elidlule yisibonelo esihle sokuthi umNyango wezeziMali wenza umsebenzi omuhle kanjani ukumelana nengcindezi.
ALUSEKHO uqweqwe lukasomabhizinisi waKwaZulu-Natali uNkk uLydia Mzoneli. UNkk uMzoneli, obeneminyaka ewu-94, nowaduma ngoxhaxha lwamagaraji ubaziwa nangokunikela njengoba kunamasonto aseWeseli aphosa esivivaneni ukuwakha. Wake wawumengameli weNafcoc eKZN nephini likamengameli ezweni lonke. Uzofihlwa ngoMgqibelo eGroutville, KwaDukuza.